Ma bilaabeysaa meheraddaada? Ma dooneysaa inaad ku abuurto koritaan xawaare sare leh badeecadaada suuqa? Tababarkani waa adiga! Soo ogow mabda'a jabsiga koritaanka oo samee wax kasta oo aad awoodid si aad natiijooyin dhakhso leh ugu hesho. Tababarkan oo laga soo qaatay koorsadii asalka ahayd ee Brad Batesole wuxuu falanqeynayaa aaladaha iyo qaababka lagu maareyn karo fikradan. Didier Mazier ayaa markaa sharxaya sida loo dejiyo istiraatiijiyaddaada, loo qorsheeyo imtixaannadaada, loona abuuro loona dhiirrigeliyo your
Aasaaska jabsiga koritaanka Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeAasaaska Excel 2016
socdaAdeegso aaladaha suuqgeynta websaydhka si aad ganacsigaaga kor ugu qaaddo